iPi Soft Markerless Motion Capture ဆော့ဝဲလ်သည် Dream Corp LLC ၏အရွယ်ရောက်ရေကူးစီးရီးဒုတိယရာသီတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ralမှပါဝင်သည် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » iPi ဖျ Markerless Motion အရွယ်ရောက်ရေကူးစီးရီး၏ဒုတိယအရာသီမှာတော့ "အိပ်မက်ထဲက Corp က LLC" ဆော့ဝဲ Play ပေါင်းစည်းထားအခန်းကဏ္ဍ Capture
iPi ဖျ Markerless Motion အရွယ်ရောက်ရေကူးစီးရီး၏ဒုတိယအရာသီမှာတော့ "အိပ်မက်ထဲက Corp က LLC" ဆော့ဝဲ Play ပေါင်းစည်းထားအခန်းကဏ္ဍ Capture
မော်စကိုရုရှား - iPi ဆော့ဖ ကြောင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los-Angeles မြို့ဖန်တီးမှုစတူဒီယိုကြေညာဖို့ကျေနပ်ဖြစ်ပါသည် Bemo ၎င်း၏အဆင့်မြင့် markerless mocap ဖြေရှင်းချက်မူတည်ပြီးဆက်လက် iPi Motion (iPi Mocap) Capture, ဟာသစီးရီးအပေါ်ကျယ်ပြန့် CG ဇာတ်ကောင်ကာတွန်းအတွက် "ကော်ပိုရေးရှင်း LLC Dream။ "ပေါ်တွင်ထုတ်လွှင် အရွယ်ရောက်ပြီးသူရေကူးတစ်လစျြလြူရှုအိပ်မက်ကုထုံးစက်ရုံအတွက်သတ်မှတ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ-action ကိုအလုပ်ခွင်ဟာသစီးရီးပြပွဲရဲ့အိပ်မက်နဲ့လက်တွေ့အကြားခွဲခြားသောစိတ်ကို-ကွေးကာတွန်းပာဖန်တီးရန်အစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီထုတ်လုပ်မှုပိုက်လိုင်းနှင့်ကျယ်ပြန့်အဆိုကိုဖမ်းနည်းပညာတောင်းဆိုနေပြီ။
ပုပ်ခရမ်းချဉ်သီးပေါ်တဲ့ရှားပါး 100% နှင့်အတူအရွယ်ရောက်ရေကူးဘို့တစ်ဦးကကြီးမားသောထိခိုက်, ပြပွဲရဲ့တတိယရာသီမတိုင်မီရာသီနှစ်ခု၏ဝန်ကြီးချုပ်၏ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ "အိပ်မက် Corp က LLC" created ညွှန်ကြားနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်ဒံယလေသ Stessen ထုတ်လုပ် (ယောဟန် Krasinski, စတီဖင်ကုန်သည်အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူများဖြစ်ကြသည်) နှင့်ရာသီတစျခုနဲ့ Amazon ချုပ်နှင့် YouTube ပေါ်မှာလက်ရှိရရှိနိုင်နှစ်ခုနှင့်အတူ Bemo ကထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပြပွဲရဲ့တတိယရာသီကဒီနွေရာသီထုတ်လုပ်မှုစတင်စီစဉ်ထားသည်။
ကလစ်နှိပ်ပါ ဒီမှာ ရွေ့လျားမှုဖမ်းယူပြပွဲရဲ့ဇာတ်ကြောင်းသို့ထည့်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်မည်သို့နမူနာကြည့်ရှုရန်။
Brandon Parvini, ပြပွဲနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာအချိန် iPi Mocap အသုံးပြုသူများအတွက်ဒီဇိုင်နာ / တိရစ္ဆာန်များ, သောပြပွဲရဲ့ထုတ်လုပ်မှုရွေ့လျားအလွန်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှင်းပြ Real-time ရွေ့လျားမှုဖမ်းနည်းပညာ AfterEffects လည်းရုပ်ရှင်ရုံ 4D ပါဝငျသော post ကိုထုတ်လုပ်မှုပိုက်လိုင်းမှအရေးကြီးသည် နှင့် Zbrush ။
ကို Creative အတိုကောက်:
Parvini သူတို့အနေနဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲ၏ပထမဦးဆုံးကြမ်းတမ်းဖြတ်မြင်သောအခါပုံမှန်ထုတ်လုပ်မှုစတင်သည်ကြောင့်မှတ်ချက်ပြုထားသည်။ ပြပွဲရဲ့ဖန်တီးမှု၏တာ Animation, အအယ်ဒီတာများနှင့် Stessen အကြား "အတိုကောက်" ကနေတဆင့်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည်သေံနှင့်ရိုက်ချက်ရွေးချယ်ရေးလေ့လာနေနှင့် created ခံရဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်တဲ့ဇာတ်ကောင်သို့မဟုတ်ကိန်းဂဏန်းမှအခွင့်အလမ်းများကိုသို့မဟုတ်ကိုးကားရှိပါတယ်ဘယ်မှာကြည့်ဖို့တစ်ဦးချင်းစီဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုတုံ့ပြန်မှုအစီအစဉ်ကိုဆုံးဖြတ်သည်။ ရွေ့လျားမှုဖမ်းယူလိုအပ်ပါသည်ဆိုပါကအသင်းကိုသာတစ်နေ့မတိုင်မီသိတယ်အချိန်အများကြီး။ တခါတရံမှာတောင်းဆိုမှုများကိုထိုနေ့ဖမ်းယူလိုအပ်သည်။
"ကျနော်တို့ကမတည်ရှိပါသောသူအပေါင်းတို့ဖန်တီးမှု parameters တွေကိုအပေါ်အခြေခံပြီး CG ဇာတ်ကောင်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတဘို့ဖန်တီးမှုဦးတည်ချက်တစ်ခုကြမ်းတမ်းအယူအဆပေးထားပါတယ်" Parvini ကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကတော်တော်လေးအများကြီးပြေး-and သေနတ်ဖြစ်ကြသည်။ တည်းဖြတ်နေဆဲကျွန်တော် 3D ကာတွန်းနှင့်ဖြေရှင်းနည်းပညာသို့ရွေ့လျားခြင်းနှင့်ဖန်တီးမှုနေကြသည်ကိုဆင်းသော့ခတ်နေစဉ်ကြောင်းဖွင့်လာမေးတယ်။ ငါဖမ်းလိုအပ်ပါတယ်ရှိရာအချိန်လေးငါအကြမ်းဖျင်းတစ်4×4ခြေလျင်အာကာသ၌ငါ့စားပွဲခုံမှာညာဘက်ရှိတစ်ဦးမစင်များနှင့်ဖမ်းမိအရေးယူပေါ်မှာနေရာချခြင်း, Kinect ကဆွဲထုတ်။ "
သူ iPi Mocap ၏ခွန်အားရုပ်ရှင်ရုံ 4D, စတူဒီယိုရဲ့အလယ်ပိုင်း 3D လျှောက်လွှာနှင့်အတူအသုံးပြုခြင်းနှင့်ချောမွေ့ပေါင်းစည်းမှု၎င်း၏လွယ်ကူခြင်းဖြစ်ပါသည်ထပ်ပြောသည်။ "iPi Mocap ကြောင့်ပိုက်လိုင်းလက်နက်တိုက်တစ်အကြမ်းခံများနှင့်အစားထိုးလို့မရတဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီဖြစ်သောအသံသွင်းနှင့်အတူလှိမ့ရဖို့ပျော့သွားတာကိုနဲ့ setup အများကြီးမလိုအပ်ပါဘူး။ တိကျသည်နှင့်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုပိုက်လိုင်းများတွင်လွယ်ကူစွာအလုပ်လုပ်တယ်တဲ့ရွေ့လျားမှုဖမ်းယူဖြေရှင်းချက်ရှိခြင်း, အန္တရာယ်များကိုယူပြီးကျွန်တော်လူတိုင်းအတွက်တစ်ဦးထက်ပိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာကြီးနှင့်အမြင်အာရုံဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးနိုင်နိုင်အောင်ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ကိုယျ့ကိုယျကိုကိုဗတ္တိဇံဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းအားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ "
iPi Motion Capture အများ၏ဗားရှင်း 4.1 ဒီဇင်ဘာလ 2018 အတွက်ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်အတော်ကြာတိုးမြှင့်မှုများအများအပြားအတိမ်အနက်ကိုအာရုံခံကိရိယာများအတွက်ခြေရာခံကို real-time ထည့်သွင်းရန် (ကတစ်ခုတည်းကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် iPi ဖျရဲ့ Distributed မှတ်တမ်းတင်အင်္ဂါရပ်ကနေတစ်ဆင့်ချိတ်ဆက်အများအပြားကွန်ပျူတာများတစ်ခုခုနဲ့ချိတ်ဆက်) အဖြစ်အလိုအလျောက်ထပ်တူတပ်ဆင်ထားခဲ့သည် flash ကိုထောက်လှမ်းအပေါ်အခြေခံပြီး action ကိုကင်မရာဗီဒီယိုများ။
"iPi Mocap စျေးကြီး greenscreen စတူဒီယိုနှင့်အာရုံခံဝတ်စုံဘို့လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲတတ်နိုင်နှင့်လက်လှမ်းကြောင်းနည်းပညာနှင့်အတူထုတ်လုပ်မှုဖန်တီးမှုစိတ်ကူးကနေသွားကြဖို့အနုပညာရှင်တွေကို enable ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်," ကပြောပါတယ် မိုက်ကယ် Nikonov, iPi ဖျတည်ထောင်သူနှင့်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်နည်းပညာဗိသုကာ။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစစ်အမှန်အချိန်ခြေရာခံ function ကိုဖောက်သည်အိပ်မက် Corp က LLC '' တူသောအစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီဘဏ်ဍာများအတွက်လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုပိုမိုကောင်းမွန်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်၏အချိန်မှာ 3D ဇာတ်ကောင်, လွှဲပြောင်းရွေ့လျားမှုခြေရာခံခြင်းရလဒ်များကို preview ပေးနိုင်ပါတယ်။ "
iPi Motion ဗားရှင်း4Capture ၏ပစ်လွှတ်မှုနှင့်အတူ iPi ဖျစဉ်အမြဲပြုရသောလိုင်စင်မော်ဒယ်မိတ်ဆက်ပေးသည်။ အဆိုပါအစဉ်အမြဲလိုင်စင်အချိန်ကန့်သတ်မရဖြစ်ပြီးအပြည့်အဝထောက်ခံကြောင်းနှင့် software updates များကိုအတူနှစ်နှစ်ပါဝင်သည်။ iPi Motion ဗားရှင်း4Capture စာရင်းသွင်းခြင်း-based မော်ဒယ်အဖြစ်ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ စျေးနှုန်းများဆော့ဖ်ဝဲဗားရှင်း (Express ကို, အခြေခံ, Pro ကို) နှင့်ကြေးပေးသွင်း၏ကြာချိန်ပေါ် မူတည်. $ 165 မှ $ 1995 ကနေအထိ။
iPi ဖျလိုင်စင်နှင့်စျေးနှုန်းအပေါ် additional information ကိုရရှိနိုင် ဒီမှာ.
အရွယ်ရောက်ပြီးသူရေကူး Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida Dreamcorps LLC ပေါင်းစည်းမှု iPi ဆော့ဖ markerless ရွေ့လျားမှုဖမ်းမိ post ကိုထုတ်လုပ်မှု SJGolden - လှံ & Arrows ကိုလိုနီ / ချီကာဂို TVU ကွန်ယက် 2019-04-30
ယခင်: အယ်လ် Kamel စနစ်များ TVU အဝေးမှထုတ်လုပ်မှုစနစ် (RPS) နှင့် TVU nano ဗီဒီယို transmitter ကိုစေလွှတ်ခြင်းဖြင့်လာမယ့်အဆင့်အထိမော်တာပန်ကာအတှေ့အကွုံယူ
နောက်တစ်ခု: အဖွဲ့ဦးတည်ဇိမ်ခံခရီးသွားလုပ်ငန်းဒါဘီပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် "Away မြား"